Job Center - Pathein Industrial City
PIC Project Team
About Pathein City
Position : Executive (Chief Operation Officer Office)
Job Location : Pathein , Ayeyarwaddy Region.
The Executive will provide executive-level support to the Chief Operating Officer (COO). The primary responsibilities of this role are to maintain the COO’s schedule, coordinate with internal and external stakeholders, provide logistical and travel support and work on operations related projects. The person will report directly to the COO and will be based in Pathein, Ayeyarwaddy Region.
Maintain an accurate and detailed calendar for COO, manage and log incoming scheduling requests, re-schedule meetings upon request, proactively communicatechanges, and anticipate and respond to scheduling conflicts
Ensure consistent and efficient interaction with other levels across the organization; demonstrate poise and tact under pressure and handle matters with sound judgment and confidentiality
Bachelor’s degree inarelated field plus two or more years of professional work history
One or more years of experience in providing high-level administrative support to executives
Outstanding interpersonal skills and preference for collaboration with proven success working with others; ability to work with high profile individuals externally, as well as
Ability to work inafast-paced and sometime unpredictable environment; works well
Fluency in English required. Fluency in other languages highly preferred such as Chinese.
Travel up to 10 % travel (internationally and/or domestically)
How to apply : Please email to hr@picmyanmar.com with your Microsoft Word CV File.
Position : Junior Executive (Administration)
စာရေးကိရိယာများ နှင့်ရုံးသုံးပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ ထုတ်ပေးရန်။
၀င်စာ/ ထွက်စာ များ စနစ်တကျထိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်။
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူများ ဦးစားပေးမည်။
Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ (M/S Word, Excel, Power Point, E mail,
လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်းတွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အသေးစိတ်ဖော်ပြပြီး အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့်တကွ အောက်ဖော်တွင်ပြထားသော လိပ်စာအတိုင်း
ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံစာ မူရင်း၊ ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ မူရင်း
ပညာအရည်အချင်းမှတ်တမ်းမိတ္တူ (ဘွဲ့လက်မှတ်၊ အခြားတက်ရောက်ထားသော
ပုသိမ်ငပုတောလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၃)မိုင်(၅)ဖာလုံ၊ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
Contact Phone : 042-25880,25881 (Fax No: 042-23877)
Position : Junior Executive (Land Procurement)
Gender : (Male/ Female)
၀ယ်ယူသည့်မြေများ၏ သက်ဆိုင်ရာမူရင်းအထောက်အထားများ မှတ်တမ်းရေးသွင်းထိန်းသိမ်းခြင်းများ
လစဉ်မြေဝယ်ယူပြီးစာရင်းများအား ငွေစာရင်းဌာနရှိစာရင်းများနှင့် လစဉ်တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးနိုင်ရန်
ဌာနရှိစာဝင်/စာထွက်များ စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ရေးသွင်းခြင်းဆောင်ရွက်ရန်။
ဌာနတွင်းအသုံးပြုသည့် မှတ်တမ်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများအားစနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းခြင်း။ (မြေပုံများ၊
မြေစာရင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားများ၊ Approval Letter များ၊ မြေ၀ယ်ယူရေးဆိုင်ရာ စာရင်းများ ၊
မြေ၀ယ်ယူမှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း၊ မှတ်တမ်း၊
အမိန့်စာများအားထိန်းသိမ်းခြင်း/ တရားလွှတ်တော်မှ အကြံပြု/ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း စာချုပ်များ
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည့် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊
နယ်မြေခံကျေးရွာသားများ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရာဌာနအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်
Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ (M/S Word, Excel,Power Point, E-mail, internet)
လျှောက်ထားလိုသူများသည်ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်းတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အသေးစိတ်ဖော်ပြပြီး အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့်တကွ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော လိပ်စာအတိုင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Hotline : 09 4000 81 881